News Collection: रेखा : मुर्खबाट विद्वान बन्दै !
रेखा : मुर्खबाट विद्वान बन्दै !
सँधै रोमान्टिक मुडमा भेटिने रेखा थापा सोमबारको जन्मदिनमा भने नोस्टाल्जिक मुडमा देखापरिन् । अलि बढी नै नोस्टाल्जिक । दाम्पत्य जीवनको यो विन्दुसम्म पनि मातृसुखको अभाव खेपिरहेकी रेखाको अनुहार पढ्दा लाग्थ्यो -उनमा आमा बन्नुको चाहना चरमतातर्फ उन्मुख छ । तर, एक्लै आमा बन्न सकिदैंन भन्ने जैविकशाष्त्र उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । र त उनी यसअघि नै पहिली पत्नीबाट सन्तानसुख बोध गरिसकेका पति छवि ओझासँग केही दुःखित देखिन्थिन् ।
'गतवर्षको जन्मदिन मनाउँदा म चाँडै नै आमा बन्ने सोचमा थिएँ । यसले मलाई उत्साहित पनि बनाउँथ्यो । तर, आज ममा कुनै त्यस्तो उत्साह छैन । कारण आमा बन्न म एक्लैले मात्र सोचेर पनि हुँदैन । यसमा दोस्रो व्यक्ति अर्थात श्रीमानको पनि साथ चाहिन्छ । तर, छवि यस कुरामा उत्साहित छैन । किनकी साँच्चै भन्नुपर्दा मेरै उमेरको छविको छोरा छ । उसले पहिलो सन्तान जन्मँदाको खुशि लिइसकेको छ । कुनैदिन म आमा त हुन्छु तर यही दिन हुन्छु भनेर किटान गर्न सक्दिँन । कोखमा सन्तान होस । म पनि गृहणी बन्न पाए हुन्थ्यो । यस्ता कुरा मेरो मनमा नउठेका पनि होइनन् । मैले यस्तो अवसर पाएकी छैन' रेखाको मुहारमा भावकुता पोतियो ।
सोमबार रेखाले जन्मदिन आमासँग मनाइन् । छविले रेखाको जन्मदिनमा शुभकामना पनि दिएनन् । उनी होमप्रोडक्सनको सिनेमा 'रावण'को सुटिङमा ब्यस्त रहे । जन्मदिनमै सुटिङको धपेडीमा खट्नुपरेपछि रेखाले सोचेजसरी जन्मदिन मनाउन पाइनन् । अघिल्लो जन्मदिन नर्लिङ रिसोर्टमा मनाउँदा गोपीकृष्ण मूभिजले रेखालाई विदा पनि दिएको थियो । तर, होमप्रोडक्सन अर्थात पतिबाटै उनलाई त्यस्तो राहत मिलेन जुन कुरा उनको सोचको एकसय असी डिग्री विपरित थियो ।
जन्मदिन त निमित्त कारण मात्र हो । पछिल्लो समय छवि रेखाप्रति त्यति रिल्याक्स लाग्दैनन् । नियमित आकस्मिकताजस्तो ठाकठूक त परिहाल्छ यद्यपी त्यसको असर आमा बन्नुको रहर र जन्मदिनमा देखापरेको छ । आफ्ना समकालिन अभिनेत्रीहरु धमाधम आमा बनिरहेका र बन्ने क्रममा रहेकाले रेखामा पनि त्यो इच्छाका पालुवाहरु पलाउनु अस्वभाविक होइन । अझै सन्चिता लुइँटेललाई गतमहिना दहीच्युरा खुवाएपछि त 'आमा बन्ने पालो रेखाको' भनेर ट्याब्लोइड र ब्रोडसिटले नछापेका पनि होइनन् । तर, रेखाको आमा बन्ने मार्गमा छवि समझदार भैदिएनन् । नेपाली सिनेमाको लोकप्रिय जोडीमा दरारका चिराहरु सुरु हुन थाले ।
जन्मदिनको छेको पारेर रेखाले आफूलाई 'जिन्दगी फिक्का लाग्छ' भन्नु विनाअर्थ आएका कुराहरु होइनन् । 'मुर्खबाट विद्धान बन्दै' गरेकी रेखालाई विद्धान बन्दै गर्दा जीवनका धेरै सुख र आयमबाट जलन पनि हुन थालेको छ जुन उनी क्रमशः परिपक्व बन्दै गरेको संकेत हो । तर, यो परिपक्वतासँगै दाम्पत्यजीवनमा समझदारी समेटिनुपर्छ । नत्र सम्बन्ध भन्ने केवल प्राविधिक कुरा मात्र हो त्यसको स्वरुप जस्तो पनि हुनसक्छ । विश्लेषकहरु भन्छन् -'यदि छवि ओझा रेखालाई आमा बन्न दिने कुरामा सहमत छैनन् भने यो कुरा पक्का हो उनी रेखालाई ब्यावसायिक साधनको रुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् ।' रेखालाई जन्मदिनको शुभकामना !